यस्तो ठाउँ जहाँ को’रोना पोजेटिभ हुने हरेक व्यक्तिलाई सरकारबाट प्राप्त हुन्छ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ ! – Namaste Dainik
August 8, 2020 NamastedainikLeaveaComment on यस्तो ठाउँ जहाँ को’रोना पोजेटिभ हुने हरेक व्यक्तिलाई सरकारबाट प्राप्त हुन्छ १ लाख ५० हजार रुपैयाँ !
एजेन्सी। अमेरिकाको कयालिफोर्नियाको एक काउन्टीले को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण पुष्टि भएका हरेक व्यक्तिलाई १ हजार २ सय ५० डलर अर्थात एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिन थालेको छ। हरेक व्यक्तिले खाना खर्च, कोठा भाडा, फोन र अन्य सहयोगका लागि भन्दै यो रकम दिने गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
क्यालिफोर्नियाको अलामेडा काउन्टीको सुपरभाइजर्स बोडले सं’क्रमित व्यक्तिमा आर्थिक भार नपरोस् भनेर यस्तो निर्णय लिइएको जानकारी दिइएको छ । क्वारेन्टाइनमा बस्न र आइसोलेट रहँदाको समयमा आर्थिक भार नपार्नका लागि यस्तो निर्णय लिइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
लस एन्जलस टाइम्सका अनुसार काउन्टीको बोर्डले सर्वसम्मत यो निर्णय गरेको थियो । कोरोना रोक्नका लागि यो विशेष कदम भएको पनि बोर्डले जनाएको छ। रकम लिनका लागि व्यक्तिले क्लिनिकल टेष्ट गर्नूपर्छ । परीक्षणमा कोरोना देखिएमा बोर्डले रकम दिनेछ। अलामेडा काउन्टीले रकमले प्रोत्साहन भएर नागरिक आइसोलेसनमा बस्ने अपेक्षा गरेको छ । रकम पाइने भएपछि धेरै मानिस परीक्षणका लागि आउन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री: भगवान श्रीरामको जन्मभूमि माडी नै हो, भब्य मन्दिर बनाउनुस् !